‘गठबन्धनको कार्यशैली हेर्दा म त फेरि केपी ओलीको पूनरावृत्ति हुने देख्छु’ : डा. सुरेन्द्र केसी « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, ३ कार्तिक । राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले प्रमुख राजनीतिक दल र यसका शीर्ष नेताहरु लोकतन्त्रको आचरणअनुसार चल्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले लोकतन्त्र बलियो बनाउनको लागि योग्यताक्रम, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । तर, नेपालमा पछिल्लो समय योग्यताभन्दापनि आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने, नियुक्ती गर्ने परिपाटी देखिएको भन्दै उनले गुनासो पोखे ।
उनले यो सरकारको बढिमा कार्यकाल १३ महिना भएको बताए । तर, यसअघि राजदूत बनाएर पठाएकाहरुलाई धमाधम फिर्ता बोलाउने काम गरिएको भन्दै उनले यसरी कसरी राम्रो सन्देश जान्छ त ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले भने,‘म त गठबन्धनको कार्यशैली हेर्दा फेरि केपी ओलीको पूनरावृत्ति हुने देख्छु । अबको निर्वाचनपछि सरकार हाक्ने पालो कांग्रेसको थियो । अहिले त कस्तो भयो भने प्रतिपक्षीमा बस्ने सत्तामा गयो । सत्तामा बस्ने प्रतिपक्षमा गयो ।’
अहिले संघीयता महंगो भएको भनेर जनगुनासो आएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘हामीले प्रणालीको लागि लडेको ७१ वर्ष भयो, तर के भयो त ? हेर्नुहोस त नेकपाले बहुमत पायो, तर बहुमत कसले भाँडयो ? नेपाली जनताले त होईन नि । लोकतन्त्र भन्दैमा कहाँ नाङ्गै नाच्न पाईन्छ ?’ अहिले मुलुकमा १७ खर्बको ऋण रहेको पनि उनले तथ्यांक सुनाए । उनले भने,‘हामीसँग साँढे १६ खर्बका बजेट छ । ११ खर्बको त व्यापार घाटा छ । ६ खर्बको बेरुजु छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्न सक्छौं त ? आजको प्रश्न त यो हो नि । सरकारी तथ्यांकअनुसार ५२ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । यो सरकारी आँकडा हो, मलाई एक करोडको हाराहारीमा होलान जस्तो लाग्छ । मुलुकलाई वैदेशिक ऋणको दुश्चक्रमा राख्नुहुँदैन् ।’
उनले अहिले सिंगो अदालतमाथि प्रश्न उठेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘जेठानमन्त्री बने, पछि राजीनामा दिए । अब सम्धीलाई राजदूत बनाउने कुरा हुँदैछ ।’ उनले सांसद, पार्टी पदाधिकारी, मन्त्री, तथा प्रधानमन्त्री दुई चोटी मात्रै हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसको लागि नेताहरुले पहल लिनुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘तपाईँहरु यसको लागि लड्नुहोस ।’ उनले अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको ग्राफ माथि जाने पनि विश्लेषण गरे । उनले भने,‘ओलीको कहर मुलुकले अर्को दश वर्ष धान्ने म देख्दैछु ।’ उनले समग्र पार्टीमा युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्ने पनि बताए र यसको लागि युवाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।